हरेक समस्याकाे समाधान स्कूल बन्द गरेर खाेज्नु गलत - Ujyaalo Nepal
जनप्रतिनिधि तथा पालिका कर्मचारीका लागि लैङ्गिक समानाता तथा समावेशिकीरण मूल प्रवाहीकरण अभिमुखिकरण कार्यक्रम
हरेक समस्याकाे समाधान स्कूल बन्द गरेर खाेज्नु गलत
नीजि विद्यालयहरुले निकै प्रतिकुलताका वीच सकारात्मक योगदान दिदै आएका छन ।
By ujyaalo	 Last updated Apr 5, 2021 140
रामबहादुर मोची ।
नेपालमा शिक्षालाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोण र व्यवहारमा खास परिवर्तन आएको छैन । पछिल्लो समय वातावरण प्रर्दुषण कम गर्ने नाममा चार दिन विद्यालय बन्द गरिनु कति व्यवहारिक, वैज्ञानिक र तर्कपूर्ण थियो ? के विद्यालय बन्द गर्दैमा वातावरण स्वच्छ भैहाल्यो त ? उद्योग कलकारखाना चलाउन हुने, सवारी गुडाउन हुने, ईटा भट्टादेखि सिमेन्ट कारखाना वा त्यस्तै खाले सबै धुवाँ धुलो हुने क्षेत्रमा बन्द गर्नु नपर्ने ।
तर स्कूलहरु बन्द गर्नुपर्ने सरकारी नीतिका विरोधाभाषी निर्णयहरुका कारण विद्यार्थीहरुको सिकाईमा, स्कूलहरुको शैक्षिक क्यालेण्डरमा र समग्र शिक्षा प्रक्रियामा नै असर परिरहेकोतर्फ सरोकारवालाको ध्यान पुग्नैपर्छ । यो एउटा स्यानो उदाहरण मात्र हो, जसले स्कूलहरुप्रति राज्यको रवैया र व्यवहार कस्तो छ भन्ने विशाल संसार चियाउन मद्धत गर्छ । कोरोना भाईरस, कोरोना संक्रमणका कारण करीब एकवर्ष बन्दको मारमा परेर थलिएका स्कूलहरुलाई अब विना कुनै अवरोध निर्वाध सञ्चालन हुन दिनुपर्छ । हरेक समस्याकाे समाधान स्कूल बन्दबाट खाेज्ने परीपाटी नै गलत छ ।
प्रत्येक बच्चाले जन्मदै उसमा खास विशेष क्षमताहरु लिएरै आएको हुन्छ । स्कुलहरुले उसको क्षमताको पहिचान गरेर क्षमता प्रष्फुटनको अवसर दिने, क्षमता विकासमा होस्टेमा हैंसे गर्ने मात्र हो । एउटा विद्यार्थी ट्रयाक एण्ड फिल्डमा दौडेर लाखौं दर्शकको ताली र वाही वाही बटुल्छ । मिडियामा हेडलाईन बन्छ । तर कक्षा कोठामा एउटा हिसाब मिलाउन नसकेर उ दण्डित भैरहेको हुन्छ । लास्ट बेन्चर विद्यार्थीहरु किन हुन्छन ? त्यसमा स्कूल, अविभावक, समाज, सरकारको समग्र शैक्षिक नीति समेत को कति मात्रामा जिम्मेवार छन भन्ने बारेमा पनि अब तथ्यपरक, बस्तुनिष्ठ बृहत बहस हुन आवश्यक छ । लास्ट बेन्चर विद्यार्थीहरुलाई उनीहरुको क्षमता अनुसार सिकाईको अवसर सृजना गर्न नसक्नु त्यो हाम्रो शिक्षा नीतिको समस्या हो, विद्यार्थीको पट्क्कै होईन ।
हाम्रो सरकारी शैक्षिक नीति भन्दा बाहिर गएर नीजि स्कूलहरुले शिक्षण सिकाई गर्न सक्ने अवस्था त छैन । तर सकेसम्म आफ्नै बलबुताले नीजि स्कूलहरुले विद्यार्थीहरुको रुचि, क्षमता र उसको परिवेश अनुसारका सिकाईमा जोड दिदै आएका छन । एकातिर सरकारको अव्यवहारिक नीति पनि मान्नुपर्ने अर्कोतिर आफ्ना वालवालिकाहरुको अवस्था, योग्यता, रुचि र क्षमताको सही पहिचान गरी उनीहरु सोही अनुसार शिक्षण सिकाई गरेर सुयोग्य नागरिक बनाउनमा पनि नीजि विद्यालयहरुले निकै प्रतिकुलताका वीच सकारात्मक योगदान दिदै आएका छन ।
हाम्रा स्कूलहरुलाई नीति र शव्दमा शान्ति क्षेत्र घोषणा त गरियो । तर वास्तविक रुपमा हरेक पट्क कुनै पनि क्षेत्रको बन्द गर्ने पहिलो सूचिमा विद्यालयहरु नै पर्छन । सरकारी बन्द नीतिको परीक्षण स्कूलमा नै हुन्छ । शिक्षा क्षेत्रलाई नै प्रयोगशाला बनाईन्छ । राजनीतिक दलका भातृ संघ संगठनहरुको आन्दोलनको पहिलो निशानामा पनि स्कूलहरु नै पर्छन । राजनीतिक दलहरुले र तिनका भातृ संघ संगठनहरुले समेत विद्यालय शान्ति क्षेत्र हुन भन्ने तथ्यलाई व्यवहारमा लागू, गर्न गराउन ध्यान दिन नसक्नु दुखलाग्दो बिडम्वना नै हो ।
स्कूलहरुलाई स्वच्छ, शान्त वातावरणमा अध्ययन अध्यापनको अनुकुल अवस्था सृजना गरिदिनेतर्फ सबैको ध्यान जान सक्नुपर्छ । स्कूलहरुले नै वालवालिकाहरुको खास क्षमताको पहिचान गरी त्यसलाई उजागर गर्ने, विकास गर्ने हुन । त्यसैले वालवालिकाहरुलाई दैनिक जीवनमा चाहिने अत्यावश्यक सीप विकास गराउन स्कूलहरुलाई शान्ति क्षेत्रका रुपमा नै काम गर्ने वातावरण सबैले बनाईदिनुपर्छ । कम्तिमा एउटा विद्यार्थी नाच्न सकोस, गाउन सकोस, बोल्न मज्जाले सकोस । उसले समाजमा आफूलाई निर्धक्कसंग आफूलाई स्थापित गर्न सकोस भन्ने हेतुले नै उनीहरुको सिकाईलाई हामीले जोड दिनुपर्छ ।
कास्की मोर्डनाईज्ड एकेडेमीका संस्थापक तथा प्रिन्सिपल एवं एन प्याव्सन कास्कीका निवर्तमान अध्यक्ष मोचीसंग उज्यालो नेपाल डटकमका विशेष प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीमा आधारित ।
प्रकाशित: २३ चैत्र २०७७, सोमबार १३:५५